Nkọwa:Obere ụgbọala dị n'èzí,Ebube ụgbọala na-adọba ụgbọala,Ebe a na-edebe ụgbọala na-adọba ụgbọala
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ > 100W Na-echekwa ebe a na-edebe ihe igwefoto
Na-achọ ọrụ dị arọ, dị ike na-akwụ ụgwọ-arụmọrụ nke N'èzí Led Garage Light nke na-enye ogologo ndụ nke ihe karịrị 50,000 awa nke na-adịghị arụ ọrụ ọ bụla? Uche a na-ejide igwe ọkụ na-adọba ụgbọala emebe iji gbochie ihu igwe ihu igwe na-enye ekele maka ike ịnwụ anwụ na-ekpuchi ụlọ nke aluminom nke na-echebe nkà na ụzụ na-enwu gbaa n'ime.
Ihe dị ike nke ndị a Ugbo ụlọ na-echekwa ọkụ ọkụ emeela ka ha bụrụ ọkacha mmasị na ụlọ ọrụ na-achọ ime ka nchekwa dị gburugburu ebe obibi ahụ, ma nyekwa ndị nwe ụlọ nnukwu ogige ọkụ. Ebe nchekwa nche anọ nwere, ọ dị mfe ịwụnye ndị a udu mmiri ututu na chi ọbụbọ kpọmkwem ebe ị chọrọ ha. Mpempe ụgbọala anyị Na-enwu ọkụ nwere ike ibelata ike gị na iwepụ isi ọwụwa, nsogbu na ego na-ejikọta na ịchebe na ịkụzi ihe ndị na-adọba ụgbọala.
N'èzí Na-adọba ụgbọala Mgba ọkụ Bulbs 150W 19500lm Kpọtụrụ ugbu a
200W Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mpempe Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri Kpọtụrụ ugbu a
Obere ụgbọala dị n'èzí Ebube ụgbọala na-adọba ụgbọala Ebe a na-edebe ụgbọala na-adọba ụgbọala Obere ụgbọala na-adọba ụgbọala n'èzí 150W Ebube Na-adọba ụgbọala n'èzí Igbe ọhụụ n'èzí Ebube Mgbaba n'èzí Epeepe Mgbaba n'èzí